Daawo Video: Soomaali sheegtay inay u dagaalmi doonan difaaca Qatar - Caasimada Online
Home Warar Daawo Video: Soomaali sheegtay inay u dagaalmi doonan difaaca Qatar
Daawo Video: Soomaali sheegtay inay u dagaalmi doonan difaaca Qatar
Muqdisho (Caasimada Online) – Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Qadar ayaa Kulan ay isugu yimaadeen waxay ku taageereen Go’aanka dhex-dhexaadnimo ee Dawladda Soomaaliya ay ka Qaadatay Xiisada Siyaasadeed ee dalalka Khaliijka.
Dhinaca kale Waxay Taageero iyo mahad celin u muujiyeen Amiirka Dalka Qadar Sheekh Tamiim Bin Xamad Al-thani, Waxayna sidoo kale Saxeexeen Boodh-wayn oo Shacabka Dalka Qadar iyo Jaaliyadaha kala duwan ee ku dhaqan dalkani ay muujinayeen Dareenkooda iyo sida ay u garabtaagan yihiin Dalka Qadar.
Ugu horayn Waxaa ka hadlay Gudoomiyaha Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Qadar Cali Askar iyo Qaar kamid ah Bulshadii kala duwaynayd ee Munaasibadan kasoo Qayb galay, Iyagoo sheegay inay garab taagan yihiin dalka Qadar, Islamarkaana Dulmi lagu sameeyay.
Si aad usoo degsato APP-ka cusub ee Caasimada Online, fadlan raac link-yada hoose.
Android: Haddii aad isticmaaleyso taleefonada ku shaqeeya Android, sida Samsung, HTC, LG iyo wixii la mid ah) fadlan click sii, link-ga hoose, wuxuu ka geynayaa Google Plays tore-ka, kadiba degso app-ka. HALKAN CLICK SII
iPhone: Sidoo kale, haddii aad isticmaaleyso iPhone, fadlan click sii, link-ga hoose, wuxuu ka geynayaa App store-ka, kadibna soo degso app-ka Caasimada Online. HALKAN CLICK SII